Ụbọchị My Pet » Akpa a Nta Nwanyi Mgbe Ịgba Alụkwaghịm Mere Easy
Age kara mmekọahụ mmekọrịta bụ mba ndị ọzọ ihe na-adịghị ahụkebe na onu. Otú ọ dị, ndị nke òtù ụfọdụ na-etinye aka mmekọrịta dị otú ahụ karịa ndị ọzọ. Dị ka ọmụmaatụ, dị ka a nnyocha e bipụtara na Alụmdi na Nwunye na Family Review, gbara alụkwaghịm bụ ndị ọzọ yiri ka ụbọchị na ịlụ di ọzọ inyom ukwuu tọrọ ha.
Gịnị mere ọtụtụ gbara alụkwaghịm ikom anya ka ụbọchị ụmụ agbọghọ?
Ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-ekwu banyere ọtụtụ ihe na pụrụ inupụ gbara alụkwaghịm ka ndị mmadụ na-ele anya n'ihi na ndị inyom ukwuu tọrọ ha maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ndepụta dị n'okpuru na-agụnye ihe ndị kasị nkịtị n'etiti ha.
– Ha hụrụ ndị ahụ nweere àgwà nke ụmụ agbọghọ ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ.
– Mgbe a ịgba alụkwaghịm, na ọtụtụ ndị na-achọ a otutu oge iji gbakee; dị ka ha na-ama mmetụta uche obi, ha na-ahọrọ ụbọchị inyom na nke kacha nta obi akpa. Nta inyom, ruru na-erughị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ahụmahụ, n'ozuzu na-ebu na-erughị obi akpa.
– Nta inyom bụ obere yiri ka pịa ikom dajụọ na inwe ezinụlọ. Ha na-emekarị na-eche ihe banyere ugbu karịa banyere ọdịnihu; ha hụrụ n'anya-ebi na oge. Ebe ọ burukwa na-akpaghị aka na-eme ka akpa ọzọ fun maka gbara alụkwaghịm ikom.
– Ọ bụ nnọọ mfe ime ụmụ agbọghọ. Gbara alụkwaghịm ikom nọ n'afọ 40 na, 50'S ma ọ bụ 60 a na-enwe ego na-ezuru ha na-eto eto mmekọ na-eju ebe ha (ụmụ agbọghọ na) mgbe kemgbe na-, ịzụta ha onyinye ha mgbe rọrọ nke na-na idozi nsogbu ha (nke ndị na-emekarị na-enweghị isi ndị) na oké okè. Ihe na-abụkarị iji mee ka a na-adịgide adịgide echiche na-eto eto ndị inyom.
Ezie na ihe nile tụlere n'elu nwere ụfọdụ ọrụ na-egwu mgbe a gbara alụkwaghịm na-nwoke ekpebie na-akpa a nwaanyị ukwuu tọrọ ya, e nwere ike ịbụ ozo putara ihe n'azụ dị otú ahụ a na-ahọrọ nke nwoke. E nwere ndị ikom na-amalite na-achọ ụmụ agbọghọ dị n'ihi na ha nwere ike ịhụ na onye ọ bụla nke ha afọ otu. Statistics na-ekpughe na ọtụtụ ịgba alụkwaghịm na United States na-ewere ọnọdụ mgbe nwoke na mmekọrịta dị n'etiti 53 na 72 afọ; nnọọ ole na ole ndị inyom nke a na ọgbọ-anọgide na otu.
Gbara alụkwaghịm? Akpa a tọrọ nwaanyị? Nọgidenụ na-ihe ndị a n'uche
Mgbe akpa a nwaanyị ukwuu tọrọ gị, ị ga na-ihe ụfọdụ n'uche.
– Onye gị maara na ọ bụghị gị bụ ntà Jehovových gburugburu; otú, adịghị agbalị gosi na ị bụ onye. Unu na-eyi agba na ị na-adịghị ala; adịghị eme ihe na ọtụtụ ndị na-eme site ụmụ okorobịa nke ugbu ọgbọ; adịghị eme ka mgbalị iji na-egosi na ị ka na-ike zuru ezu. Ndị a bụ ndị na-emekarị nnukwu turnoffs maka ihe ọ bụla nwaanyị, na-eto eto ma ọ bụ agadi.
– Na-emeso gị na-eto eto onye na-ahụ n'ụzọ dị ka ị ga na-emeso nwaanyị nke afọ gị. Ọ bụrụ na ị na-ama ihe dị ka afọ kara, mmekọrịta ga-arụ ọrụ.
– Ị nwere ike maa ịzụta onyinye maka ọhụrụ nwaanyị ná ndụ gị, ma i kwesịrị mgbe overdo ya. Ọ bụrụ na ị Flash ukwuu nke ego, nwaanyị nwere ike na-eche na ị na-dị nnọọ na-agbalị na-egosi mmeri.
Mmekọrịta dị n'etiti nwoke meworo okenye na a tọrọ nwaanyị bụ ka nkịtị dị ka ọ bụla mgbe ndọrọ mmekọahụ. Ya mere, ma ọ bụrụ na a gbara alụkwaghịm na-nwoke anya na-akpa onye ukwuu tọrọ ọ dịghịkwa ihe ọjọọ dị na ya.